October 4, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
Music Zone KTV ပိုင်ရှင် ဦးဇော်မင်းနှင့် မန်နေဂျာအား သက်န်းကျွန်း စခန်း၌ ဖမ်းဆီးထားပြီ အဖမ်းမခံရခင် အလှူလေးလုပ်သွားတာတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ Credit Han Nyein Oo Fb
ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်သူများမဖတ်ရ၊ ဖတ်ပီး ထုမိ၍ အားကုန်ပါက အငယ်ကောင်နှင့် လားလားမျှမဆိုင်ပါကြောင်း ချိတ်ချိတ်ချင်းမို့ချိတ်မိတာ၊ အမှိုက်ရှိလို့ခွေးချီးလာသလို အသွင်တူလို့ပေါင်းမိထားတဲ့ ငထူးနဲ့ငတိုး။ နာမည်ကသာ ငထူး လူက ဘားးမှမထူး။ ငတိုးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း သူခိုးသာသာ။ ခိုးဆိုးလုနှိုက် လမ်းဘေးနေလမ်းဘေးစားတွေ။ အမိမရှိ အဖမရှိ လူမှန်းမသိခင်ကလည်းလမ်းဘေးမှာ၊ လူမှန်းသိတော့လည်းလမ်းဘေးမှာ ဟုတ်နေရောဗျာ။ လူပုံစံတွေက ဘိန်းစားဆေးငတ် ဆေးပြတ်တဲ့ရုပ်၊ နံ ရိုးပတ္တလားနဲ့ ခြေသလုံးပုလွေရိုး။ စားသမျှအားနဲ့အသားက လီးမှာများလာစုသလားပဲ။ လူတော်တော် လီးကြီးကြီး။ “မင်းလီးပြစမ်း” ငထူးကမေးတာ “ဒီမှာ. ဒါတောင် မတောင်သေးဘူးနော်” ပုဆိုးလှမ်ပြရင်း ငတိုးကပြောတယ်။ လမွှေး မဲမဲရှည်ရှည်များ ထူပိန်းစွာဖုံးထားတဲ့ ၇လက်မ ဝန်ကျင်လီးကြီးက ပျော့တွဲတွဲ လဥ၂လုံးကြားမှာ အိပ်စက်နေလျက်။ ငထူးက ပုဆိုးထဲ လက်သွင်းဆွရင်း “ငါ့လီးလည်း မင်းလောက်ရှိမယ်ကွ” “ပြစမ်း. […]
Posted on October 4, 2020 Author admin	Comments Off on အခြေမရှိအနေမရှိအဆင့်တွေမို့ (အစ/အဆုံး) Like and Shareလေး ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်ရှူပေးကြပါရှင့်
သုံးကြိမ်မြောက် ပြီးသွားရတော့သည် (အစ/အဆုံး) Like and Shareလေး ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်ရှူပေးကြပါရှင့်
ကျော်ဌေးနှင့် သီတာတို့ လင်မယားမှာ အရင်ကလို တကျက်ကျက် စကားများရန်ဖြစ်ရုံပင်မကတော့။ သတ်ပုတ်ရိုက်နှက်သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သားသမီးမရှိတော့ တယောက်နှင့် တယောက် သိပ်ပြီး သံယောဇဉ်ထားကြပုံမရပေ။ သူတို့လင်မယား အိမ်ထောင်ကျတာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ တနှစ်လောက်ပဲ သောကကင်းကင်းဖြင့် နေခဲ့ရသည်။ တနှစ်ကျော်တော့ ကျော်ဌေးက ဗွေဖောက်လာသည်။ ကျော်ဌေးအကြောင်းတွေကို သီတာ မကြားချင်လဲ ကြားရသည်။ မသိချင်ပဲ သိရသည်။ ကျော်ဌေး အပျော်အပါးလိုက်စားသည်တဲ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သီတာက ဖြောင်းဖျပြောဆိုတော့ သူကရန်လုပ်သည်။ အိမ်ပြန်လာတိုင်းလည်း မူးမူးလာတတ်သည်။ လုပ်သည့်အလုပ်က လိုင်းကား ဒရိုင်ဘာ။ ဝင်ငွေကောင်းတော့ ကျော်ဌေး ပျက်တော့သည်။ ဇနီးမယား သီတာကိုလည်း ကြင်ကြင်နာနာ မရှိသည့် အပြင် ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စလေးနှင့် ရိုးမယ်ဖွဲ့ ရိုက်လားပုတ်လားလုပ်လာသည်။ သူတို့လင်မယားကို ဘယ်သူကမှ ပေးစားခဲ့တာမဟုတ်။ သူတို့ချင်း […]
Posted on October 4, 2020 Author admin	Comments Off on သုံးကြိမ်မြောက် ပြီးသွားရတော့သည် (အစ/အဆုံး) Like and Shareလေး ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်ရှူပေးကြပါရှင့်
Posted on October 4, 2020 Author admin	Comments Off on အကာအကှယျတှအေပွညျ့နဲ့ ဆေးရုံ မှာတဈဆောငျနဲ့တဈဆောငျကူးရငျး ပငျပနျးနပေမေယျ့လညျးအပွုံးမပကျြ ရှာတဲ့ ဒေါကျတာမလေး ပိုးမမှီသာ
ခင်လှိုင်ကတော့ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် သူ့ရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ ခင်လှိုင်က ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခင်လှိုင်က သူ့ရဲ့သားလေးဇေရဲနဲ့ သမီးလေးသဇင်ထူးမြင့်တို့ကိုပါ အနုပညာအမွေတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပကာသနကင်းပြီး အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတဲ့ ခင်လှိုင်က သားသမီးတွေအပြင် မြေးလေးတွေပါ ရရှိနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ခင်လှိုင်က အိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့အတူ Stay Home ကာလကိုဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ခင်လှိုင်က “အလုပ်နားပေမယ့် ကျွန်တော်မအားပါခင်ဗျာ မငွေသိမ်း လျှာအရင်းမြက်စေဖို့ ဘာဟင်းချက်မယ်ထင်ပါသလဲ” ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကိုတင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မီးဖိုချောင်ဝင်ပြီး ဟင်းတွေချက်နေတဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကလည်း တကယ့်ကိုသဘာဝကျနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်လှိုင်ကတော့ အလုပ်နားတဲ့အချိန်လေးမှာတောင် နားနားနေနေ […]
Posted on October 4, 2020 Author admin	Comments Off on အလုပ်နားရက်ဆိုပေမယ့် ချစ်ဇနီးလေးစားဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ ခင်လှိုင်